Saxiixa cusub ee Barca, Arthur Oo Shaaciyay Liiska Xidigaha Ugu Hambalyeysay Ku Biiristiisa Blaugrana %
Latest Sports NewsLatin AmericaSpain
Kooxda Barcelona ayaa waxay ku dhawaaqday inay heshiis ay la gaartay ciyaaryahanka Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo 11-kii bishaan Maarso, iyadoona daboolka ka qaaday inay kula heshiisay kusoo iibsashada aduun dhan 30 Milyan oo Yuuroo.
Xidigaan oo udhashay wadanka Brazil ayaa kasoo dhaqaaqi doona kooxda Gremio bisha soo socota ee Agoosto, markaasoo uu si rasmi ah loogu soo bandhigi doono xarunta Barcelona, ee ku taala Gobolka Catalonia ee wadanka Spain.
Arthur oo wareysi gaar ah siiyay Majaladda SPORT ee laga leeyahay wadanka Spain ayaa sheegay in kaliya ciyaaryahan Coutinho uu ugu soo hambaleeyay kusoo biiristiisa Barcelona, markaga laga reebo maamulka Gremio iyo qoyskiisa.
“Waxba kamala aan socon heshiiska – Markii lagu dhawaaqay ayaa ka arkay baraha bulshadda, waxaana xiligaas ku sugnaa Hodheel, Magaaladaan Porto Alegre, qoyskaygana mana aysan la socon, laakiin aniga ayaan wacay oo usheegay,” ayuu yiri.
“Markii aan usheegay waa ay farxeen iyagoo Talefonka iyugula dabaal-degay aadna ugu faraxay inaan ku biirayo Barcelona,” ayuu ku daray hadalkiisa.
“Renato Portaluppi [macalinka Gremio] iyo waliba ciyaartoyda iyo shaqaalah kooxda ayaa iigu hambaleeyay inaan ku biirayo Barcelona, waxayna iirajeeyeen inaan wanaag badan ku helo Barcelona,” ayuu sii daba dhigay.
“Philippe Coutinho wuxuu ahaa shaqsiga kale, ee iigu soo hambalyeeyay, isagoona ii sheegay in Barcelona ay tahay Magaalo qurux badan oo cajiib ah – Wuxuu ii sheegay in garoonka kooxda uu yahay mid cajiib ah oo wayn,” ayuu raaciyay.
“Taageerayaal wanaagsan ayaa jooga ayuu iigu yiri – Waa meel uu ciyaaryahan walba ku hirgelin karo hamigiisa – Barcelona mar walba waxay udagaalantaa koobab waana ay hanataa, ayuu iigu sharaxay,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay.